Korea Atsimo: Nahatezitra ny olona ny nandraisana ny zanakavaviny (minisitra) hiasa. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2010 12:55 GMT
Trangam-piainana tsy rariny nefa dia fahita n'aiza n'aiza: mora mahazo asa kokoa , na farafaharatsiny manana tombon-dàlana mankany amin'ny fahombiazana ireo olona avy amina ankolafim-piarahamonina manana tombony manokana. Ireo avy amin'ny saranga tsy dia manao ahoana loatra, etsy andaniny, tsy maintsy mifofotra mafy mazàna mba hahatody ny faran'ny volana.
Any Korea Atsimo, tsy ela akory izao dia nandrakotra ny pejy voalohan'ny gazety nandritra ny andro maro sy nampivonto fo ny vahoaka ny fanomezana asa ny zanakavavin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny. Ny tsindry vokatry ny hatezeram-bahoaka dia nanosika ilay minisitra hiala ary nitarika ny governemanta hiverina hampiato itony fomba fanao ‘manokana ho fandraisana mpiasa’ itony.
Raha araka ireo fitateram-baovao nivoaka avy ao an-toerana, Yu Hyun-sun, 35 taona dia nampidirina niasa tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay ny rainy, Yu Myung-hwan, ihany no minisitra tao. Ramatoa Yu dia nanao fangatahana asa tamin'ny goverenemanta, manana ny laharana Dingana faha-5 nandritra ny fotoana napetraky ny ministera ho ‘fandraisana mpiasa manokana’, ary efa niomana handray ny asany mihitsy raha nipoaka tampoka ity tantara be eto amin'ny firenena ity. Raha ny marina dia ity no fanindroany namenoan-dRamatoa Yu an'io fangatahana asa io; tamin'ny andrana voalohany nataony, tsy tafita tamin'ny dingana voalohany izay fanivanana ny antontan-taratasy izy satria efa lany andro mampanankery ny filazam-pahaizana teny vahiny nanany. Tamin'io fihodinana manokana handraisana mpiasa io dia tsy nàka olona na iray aza ny ministera, ny tolotr'asa hafa vaovao herinandro vitsy taty aoriana, no nanokatra indray ny varavarana ho an-dRamatoa Yu. Ramatoa Yu dia afa-nametraka valina fitsapana fahaizana teny vahiny hafa izay nataony teo anelanelan'izany, sady novàna sy nohamaivanina rahateo ny fomba natao ho fandraisana mpiasa ka lasa dingana roa sisa, dia ny fijerena ny antontan-taratasy sy ny dinidinika. Nahazo ny isa ambony ka tafavoaka tamin'ny dinidinika Ramatoa Yu. Izy irery no tokana voaray nandritra izay fihodinana manokana ho fandraisana mpiasa izay.
Ny gazety Ilyo Journal (the Sunday Journal – Gazetin'ny andro Alahady) izay miresaka indrindra indrindra ireo honohono mikasika ny politika sy ny fandraharahana, tamin'iny taona lasa iny, dia namoaka lahatsoratra momba ny tsy maha matihanina an-dRamatoa Yu, sy ny fitondrantenany toy ny mifanahin-jaza nandritra ny naha-mpiasa ambony azy tamina departemanta hafa tao amin'io ministera io ihany. Raha araka izay ambaran'ilay tatitra, tsy tonga niasa nefa tsy nisy fampilazàna mialoha Ramatoa Yu Hyun-sun indray andro izay ary dia ny reniny no niantso ny tale mpiandraikitra sy nialatsiny noho ny zava-nisy. Ny andro nanaraka io dia niteny tam-pahatsorana tamin'i Yu ilay tale hoe “Nahoana no tsy ianao mivantana no niantso, nahoana no ny reninano no nifampiresaka tamiko?” ary ny valiny azo avy taminy dia hoe “ raha ny marina dia ny raiko no nilazako mba hiantso, saingy i neny no niantso anao tamin'ny toerany.”
Tamin'izany fotoana, noraisin'ny maro ho toy ny honohono tsy mitombina ilay lahatsoratra, saingy ankehitriny izy io dia tanisain'ireo tatitra saiky any anatin'ireo gazety samihafa liana tamin'ilay tantara. Izany dia taloha kelin'ny nitobahan'ny fanamarihana avy amin'ireo mpampiasa maro tanatin'ireo media hafa izay nanampy trotraka ny tantaran'ireo fomba ratsin'i Yu sy ny fiankinan-dohany amin'ny ray aman-dreniny. Iray amin'ireo mpamoaka vaovao ao an-toerana, mitanisa minisitra iray tsy mitonona anarana , no mitatitra fa ‘Praiminisitra Lefitra Fahatelo’ no fiantsoana an'i Yu tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ary maro ireo mpiara-miasa tsy mahazo aina rehefa midehadehaka noho ny anaran-drainy i Yu, izay fanaony matetika rahateo.
Mety ho azo namaivanina ihany ny fandraisana ity tranga ity, ho toy ny tranga maningan'ny kolikoly, raha tsy niseho tamina vanim-potoana saro-pady toy izao. Nanome laka tafahoatra ny fepetra manokana ho fandraisana mpiasa ny governemanta, mitarika ny fihenan'ny isan'ireo olona voaray amin'ny alalan'ireo fifaninanam-pirenena ampanaovina ny olon-tsotra. Tany amboalohany ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia nihevitra ny handray ny 50 isan-jaton'ireo mpiasa vaovao ho ao aminy tamin'ny alalan'ireny fomba manokana fandraisana ho mpiasa ireny, saingy androany dia nihemotra sy nilaza fa mety hofoanana izany tetika izany.
Ny fifaninanam-pirenena dia noheverina ho ny hany fomba tokana ahafahana manome vintana mitovy an'ireo rehetra mifaninana, tsy hijerena ny sarangam-piarahamonina na ny dingana vita teo amin'ny fandrantoana fahaizana. (misimisy kokoa momba izay tantara izay no eto). Raha toa ny governemanta manandrana ny hamàrana ity tantara ity noho ny amin'ny fahasamihafana, ny vahoaka kosa manantena fa mbola hitoetra foana ity rafitra efa nanjaka ampolon-taonany maro ity. Nanameloka ilay fepetra manokana fandraisana ho mpiasa ny avy amin'ny mpanohitra ka manondro azy io ho toy ny varavarana misokatra ho an'ireo lava tanan'ankanjo / mahalala olona sy manana diplaoma ambony, indrindra indrindra fa hoe olona nahazo ‘doctorat’ avy any Etazonia. Matetika dia nofinofy sarotra tanterahana ho an'ireo olona avy amin'ny sarangam-piarahamonina antonontonony ny hanohana ara-bola fandratoam-pahalalana mandritry ny taona maro any Etazonia raha tsy mahazo fanampiana manokana avy amina fikambanana na mahazo vatsim-pianarana.
Manameloka tanteraka an'izany araka izay tratry ny heriny raha ny vahoaka, saingy ireo mpitoraka bilaogy sasany ao Korea Atsimo dia nampitandrina ny mponina tsy hanao tsoak'hevitra ankamehana loatra. Sosmikuru dia nanamarika fa maivana loatra ny handray fepetra miainga amin'ny fahavoazana naterak'ireo tranga tsy ara-dalàna tany aloha.
Ny singa tena mahatonga ity tranga ity ( ho goavana) dia ny fisoloan-toerana (ambony) omena amin'ny fomba tsy ara-dalàna nataon'olona maro efa am-polon-taonany izao. Tsy hoe voafetra fotsiny ho an'ny toerana ambony any amin'ny governemanta fa hatramin'ny asa any anatin'ireo orinasa koa. Mahazo ny toerana ambony ireo olona manana tsindry bokotra ka mahatonga ny vahoaka hihevitra fotsiny amin'izao fa misy fandraisana mpiasa amin'ny fomba maizimaizina ao rehefa ren'izy ireo fa misy olona nahazo ny toerana toy izany noho ny fifamatorana akaiky ananan-dry zareo… Maninona no tsy kolikoly rehefa mandova ny rainy mpiompy mpanan-karena ny zanany lahy ( ny toeram-piompiana sy ny vola sns.,) ka lasa mpanan-karena tahaka an-drainy koa avy eo, fa lazaina ho kolikoly mivandravandra be nony injay ny zanakavavin'ny minisitra no lasa minisitra koa rehefa nanao ezaka goavam-be (mba hahazoana izany asa izany)? Rahoviana ny olona no hiala amin'izany fomba fijerin-dry zareo (diso sy) mitanila izany?
Taterin'ny gazety fa antontan-taratasy vitsivitsy porofon'ny fandraisana mpiasa tsy nanara-dalàna nataon'ny governemanta no nesorina tao amin'ny tahirin'ny ministera. Ireo mponin'ny aterineto tsy faly dia efa namoaka taratasim-pifandraisana anatiny ‘taloha sy taorian'ny’ fandraisana an'i Yu, nivoy ireo fanovàna natao nandritra ireo dingana fampidirana an'i Yu. Na dia ireo gazety mahazatra mpifikitra amin'ny nentin-drazana aza dia nivadika tamin'ilay minisitra, ary na ivelany na anatin'ny aterineto ny adihevitra dia samy naneho ny fisian'ny kiantranoantrano/raharahan-kavana ao Korea Atsimo. Tanaty tranonkala fifanakalozan-dresaka mivantana, ilay mponin'ny aterineto : Pchom, izay milaza fa mpiasa taloha tao amin'ny governemanta, dia nilaza fa mandady ny resaka raharahan-kavana eny anivon'ny biraon'ny governemanta. Nahasarika mpitsidika efa ho 90,000 tao anatin'ny andro vitsy monja ny lahatsorany.
Takatro tsara mihitsy ny fahasahiranan-tsain'ireo olona manomana fanadinam-panjakana. Satria nianatra nandritry ny dimy taona aho ( vao lasa mpiasa Dingana faha-7 amin'ny governemanta), nolalaiko fatratra ny asako amin'ny maha mpiasa tao amin'ny governemanta ahy ary nadio tsy nisy azo nokianina ny etikako… Tsaroako irony taona (nanomanana fanadinana) nandeha maraina be tany amin'ny trano famakiam-boky aho ary efa ho amin'ny 11 ora alina vao miverina any amin'ny toerana niaingako ao anaty taratry ny diavolana (taorian'ny ora maro nianarana)… Nony tonga mpiasa Dingana faha-7 amin'ny governemanta aho [fanamarihana: ny 7 dia mbola toerana ambanin'ny 5, izay azon'i Yu], voamariko fa 50 isan-jato monja amin'ireo mpiasam-panjakana no voafantina taorian'ny nanaovana ny fanadinana ho an'ny daholobe… Ireo vehivavy mitàna toerana teknika dia voaray daholo 100 isan-jato tamin'ny alalan'ny fahalalàna olona; maro tamin'ireo mpiasa Dingana faha-6 no voaray toy ny tamin'ny fomba manokana fandraisana ho mpiasa ary ry zareo ireo dia notsongaina noho ny diplaoma nananany sy noho ny teny miampita (recommandation). Amin'ny fampidirana manokana ilàna ‘doctorat’, ireo olona manana ‘doctorat’ ihany no voaray hiasa.
Ny mponin'ny aterineto: 최성 (ChoiSung) dia nanamarika fa ity tranga ity dia namotika ny fitokisan'ny Koreana amin'ny fiarahamonina sy ny fanantenan-dry zareo mba hisian'ny rariny ara-tsosialy:
Voalohany indrindra, ity tranga ity dia nangalatra ireo lasitra (modely) teo ampela-tànana'ireo olona naniry ny hanàja ireny olobe ireny. Te-hino ny vahoaka fa ireo olona namiratra dia samihafa mihitsy amin'ireo olon-tsotra (amin'ny lafiny tsara). Faharoa, ilay tranga dia nanamontsana ny fitokisan'ny vahoaka ny foto-kevitra ijoroan'ny fiarahamonintsika – raha mifofotra mafy ianao ary mandeha amin'ny làla-marina/mahitsy, tsy misy hanohintohina anao (na zava-tsoa lehibe hosakanana tsy ho anao). Fahatelo, ny finoana fototra – ny finoana fa ireo ezaka nataonao tamin'ny fo, na dia tsy manana haavo toy ny an'i superman aza, dia hitondra vokatra indray andro any- dia nirodana ihany koa. Ireo saranga manana tombontsoa manokana eo anivon'ny fiarahamonina ihany no manao izay hahatonga ny vahoaka tsara saina ho sorena/rangitra… Izany no mahatonga ireo tanora mamerimberina mihevitra fa ‘mitovy ny olona rehetra (amin'ny lafiny ratsy)’ ary ‘fahaiza-manao miavaka (asa) – izay zavatra toa tsy misy akory. Tafita fotsiny ianao rehefa tsara fahaterahana (Avy amin'ny mpandika: zanak'olo-malaza/manam-pahefana/manan-karena) ary mahay mamboly fifandraisana manokana amin'ny olona manana fahefana.’
Ny ampamoaka nataon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia vao mainka nandrehitra ampamoakan-javatra hafa nanenika ny firenena iray manontolo. Maro ireo mpampiely vaovao no mikofoka mafy mitady fijoroana vavolombelona avy amin'ny sehatra maro samihafa, ary na dia ny vondron'ny mpitsabo aza dia mba nanao ampamoaka mikasika ny toerana maha mpitsabo sy ny fisondrotana any anivon'ireo tobim-pitsaboana lehibe (hopitaly). Angamba tokony hisaotra an-dRamatoa Yu ny olona noho ny fanairana ny sain'ny vahoaka hitodika amina olana izay efa ela no nihombo tany ambadimbadika tany.